Eray bixinta Muwaadinimo
Thursday, 17 March 2016 19:01	Written by	Mumin Alim
luuqada carabiga waddan waxa la yidhaa guriga aad degantahay,waa guriga qofku ku koro ee uu ku barbaaro ee deganaanshihiisu yahay ,marka la tilmaamayo tiro badana waxay noqonaysaa waddano”
Waddan macne ahaan waxay noqonaysaa meesha qofku deganyahay ee joogtada uu ku yahay,xiiso iyo hiila qalbigiisu u hayo ama haku dhasho ama yuu ku dhalane . ka fiiri saxaax al jaw-hari ,lisaan al carab, muc-jam al wasiid,kelmada (wadan markay ka hadlayaan).
Kelmeda muwaadinimo asalkeedu waa carabi, waxayna xidhiidh la leedahay, halka dadku degan yihiin ee ku neg yihiin juquraafi ahaan ,laakiin eray bixin ahaan waxa loo horu-mariyay inay tilmaamto xaalada siyaasadeed,bulsho ,rayidnimo, iyo xuquuqda qofku ku leeyahay dawlada .
Waxa looga jeedaa wadaninimo xubinimada dhamayska tiran ee qofku ku dhex leeyahay bulshada xuquuq ahaan iyo waajibaad ahaanba,taas macnaheeduna waxay tahay dhamaan xubnaha shacabka ee ku wada dhaqan camuuda dalka korkiisa waa kuwo siman oo aan ku kala takoorayn diin,asal,midab,dhaqaale ,siyaasad,fikir.
Muwaadinimada waxa ka dhalanaya xuquuq iyo waajibaad ay ugu muhimsan yihiin afartan qodob.
Read 485 times	Last modified on Friday, 18 March 2016 04:47
More in this category: « Hordhac Fahamka Muwaadinimada Qiimaaha Sinaantu leedahay »
Hausa Women, Modernity, and Identities
The Media, Language, and Political Stability in Nigeria